बिरामीको लागि उठेको पैसा गायब, दिल्लीमा बिरामी छट्पटाउँदै — SuchanaKendra.Com
बिरामीको लागि उठेको पैसा गायब, दिल्लीमा बिरामी छट्पटाउँदै
काठमाडौं, । आजकल कोही दीर्घरोगी या खर्चिलो बिरामी भएको खण्डमा ‘बचाउ अभियान’ बनाएर बिरामी बचाउन सक्रिय भएका समाचार यत्रतत्र आइरहेका छन् । यस्ता अभियानले धेरैको ज्यान जोगाउन पनि सफल भएको छ । कहिलेकाँही अभियानकर्ताले बिरामीकहाँ सहयोग नपु¥याएको घटना पनि छिटपुट रूपमा नसुनिएको भने होइन । यस्तै एउटा घटना इटहरीमा घटेको छ ।
घटना भोजपुरस्थीत हतुवागढी गाउँपालिका वडा नं. ६ का भोजराज राईको छोरी बिबिना राईको हो । ११ वर्षीय बिबिना राई मुटुको विरामी थिइन् । बिबिनाका दिदी तथा आफन्तले बिबिनालाई इटहरीमा झारे । सहयोगको हात फैलाउँदा धरानमा रहेका गायक तथा संगीतकार प्रभाकर राई उर्फ रामचन्द्र राईले बिबिना राईको उपचारार्थ अभियान शुरु गरे । यस अभियानमा चर्चित हास्य कलाकार उमेश राई (फुःलेन्देकी आमा)ले पनि साथ दिएका थिए । हेर्नुहोस्, अभियानको यो भिडियो ।
अभियानको लागि नयाँअनलाइनले पनि साथ दिएको थियो । अभियानमा सहभागी भई धनकुटा र डाँडाबजारसम्म पुगेको फेसबुक लाइभ र युट्युवमा भिडियो बनाई प्रचार गरेको थियो । त्यसैगरी विभिन्न देशबाट आएको रकमलाई हस्तान्तरण गरेको भिडियो सामाग्री नयाँअनलाइनले यो सन्देशसहित राखेको थियो ।
बिबिनाले नयाँ जिन्दगी पाउने कि नपाउने ? त्यो निर्णय अब तपाईं हाम्रो हातमा छ ।अभियान सञ्चालन गर्न प्रभाकर राई संयोजक रहनेगरी एक समिति निर्माण गरिएको थियो । उक्त समितिको सचिवमा अस्मिता खोवाङ राई, कोषाध्यष सुरेन्द्र राई र सदस्यहरू चन्द्र राई, सुर्य घिसिङ, लक्ष्मि राई, विष्णु राई, जुनु राई, उमेश राई, सन्देश राई थिए । कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र विरामी बिबिनाकी सहोदार दाजु हुन् ।
यो निर्णय गरेको भोलीपल्ट गाउँपालिकाको तर्फबाट गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो । निर्णय पत्र र सिफारिस गरेको पत्र ।